ब्यूँझियो लामिडाँडा बिमानस्थल, पक्की रनवेमा फुच्चे जहाज अवतरण
३ असार, खोटाङ । लामिडाँडा एयरपोर्टको स्तरोन्नती गरिएको छ । साढे दुई वर्षअगाडि शुरु भएको स्तरोन्नती योजनाअनुसार धावनमार्ग तथा एप्रोन एरिया पीच गरिएको छ । स्तरोन्नती सकिएसँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्र...
लुक्लामा चार दिनदेखि उडान भएन, २०० यात्रु अलपत्र परे
lokaantar.com . ७ महीना अघि
असार ३, २०७६ सोलुखुम्बु–तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् । मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुननसकेको लुक्ला विमानस्थलका निम...
सुर्खेत काठमाडौं दुई फ्लाइट: रनवे विस्तार गरी रात्री उडानका लागि उपकरण जडान गर्न ध्यानाकर्षण
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको विमानस्थल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। विमानस्थलको धावनमार्ग र रात्रीकालिन उडानका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्न बुद्ध एयरले प्रदेश सरकारको ध्या...
Ujyaaloonline.com . ७ महीना अघि
सोलुखुम्बु – तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान ठप्प हुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् । बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु र वर्षाका कारण शुक्रबारदेखि उडान हुन नसक्दा यात्रु अलपत्र परेका हुन् । ...
लामिडाँडामा समिट एयरको परीक्षण उडान, नियमित उडानका लागि हवाई कम्पनीले यात्रु पाउला?
bizmandu.com . ७ महीना अघि
खोटाङ।समिट एयरले मंगलबार काठमाडौं-लामिडाँडा परीक्षण उडान गरेको छ।खोटाङको लामिडाँडा विमानस्थलको स्तरोन्नति पछि समिटले परीक्षण उडान गरेको हो। सांसद विशाल भट्टराईले विकट स्थानमा हवाई उडान विकल्पको रु...
लुक्ला विमानस्थल ४ दिनदेखि बन्द : २०० यात्रु अलपत्र
सोलुखुम्बु । तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा ४ दिनदेखि उडान बन्द भएको छ । मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनै पनि उडान तथा अवतरण नहुँदा २०० यात्रु अलपत्र परेका छन् । बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु ला...